C ụba Mechanical Press Manufacturers & Suppliers - China C ụba Mechanical Press Factory
Njirimara njirimara dị iche iche: Isi ike (nrụrụ) 1/6000. Jiri OMPI pneumatic akọrọ ipigide na breeki. Ihe mmịfe ahụ na-agbakwụnye ụzọ nduzi ụzọ isii, ya na ihe mmịfe ahụ na-agbaso "ịgbatị usoro" na "usoro nrịgharị okporo ụzọ": obere ejiji, nkenke dị elu, oge njigide ogologo oge, na ndụ ndụ ka mma. A na-eji crankshaft mee ihe dị ike nke nwere ike dị elu 42CrMo, nke dị okpukpu 1.3 karịa ike ígwè ma nwee ndụ ogologo ndụ. Ndị ...
STX usoro C Frame Single Crank Mechanical Press
Njirimara njirimara dị iche iche: Isi ike (nrụrụ) 1/6000. Jiri pneumatic mgbochi mmiri ipigide breeki, gburugburu ebe obibi-echebe, ọ dịghị mmetọ, ala mkpọtụ, ogologo ọrụ ndụ. Ihe mmịfe ahụ na-anabata ụzọ ntụzi-aka nwere akụkụ isii, ya na ihe mmịfe ahụ na-agbaso "mgbatị siri ike" na "usoro ntanye okporo ụzọ": obere ejiji, nkenke dị elu, oge njigide ogologo oge, na ndụ ndozi dị mma. The crankshaft ka nke elu-ike alloy ihe 42CrMo, nke bụ 1.3 ugboro str ...
STC Series C type “Mepee Ugboro abụọ Point Crank nkenke Punch Press”
Njirimara njirimara nke isi: Iguzogide (nrụrụ) nke ahụ na mmịfe ahụ bụ 1/6000. Jiri OMPI pneumatic akọrọ ipigide na breeki. Ihe mmịfe ahụ na-anabata ụzọ ntụzi-aka nwere akụkụ isii, ya na ihe mmịfe ahụ na-agbaso "mgbatị siri ike" na "usoro ntanye okporo ụzọ": obere ejiji, nkenke dị elu, oge njigide ogologo oge, na ndụ ndozi dị mma. A na-eji crankshaft mee ihe dị ike nke dị ike 42CrMo, nke dị 1.3 karịa ike ígwè ma nwee ogologo oge ...